Republic of the Union of Myanmar, Information Team, Press Release
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၄ ရက်
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၃ ရက်
၁။ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၁၃ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၃၀၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆိုင်ကလုန်း မဟာဆင် (MAHASEN) သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်း၏ အနောက်ဘက် မိုင်(၄၁၀)ခန့် ပုသိမ်မြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင်(၅၄၀)ခန့်၊ ကျောက်ဖြူမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင်(၅၉၀)ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ (ချင်းနိုင်မြို့)၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၃၈၀)ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပါသည်။ အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းသည် မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပြီး မုန်တိုင်း ဗဟိုချက်အနီးတွင် အမြင့်ဆုံး လေတိုက်နှုန်းမှာ မိုင်(၆၀)အထိ ရှိနိုင်ပါသည်။
၂။ အဆိုပါမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ချိန်တွင် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတစ်လျှောက်တို့တွင် မုန်တိုင်း ဒီရေလှိုင်းဒဏ်များ လွှမ်းမိုးမှုများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ကြုံတွေ့ရနိုင်ချိန်တွင် ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် ဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များကိုလည်း ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှ ထုတ်ပြန်သတိပေး ပြန်ကြားလျက်ရှိပါသည်။
၃။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မုန်တိုင်းဒဏ်နှင့် ဒီရေတက်လာနိုင်သည့် နေရာများ၊ ကမ်းခြေတစ်လျှောက် တဲများ၊ ယာယီတဲများဖြင့် နေထိုင်နေသူများအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ / ၁၅ ရက်အပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသည့် နေရာများသို့ အမြန်ဆုံး ရွှေ့ပြောင်းထားရန် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်သည်။
၄။ အမျိုးသားသဘာဝဘေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းကော်မတီတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သည့် စီမံကွပ်ကဲမည့်အဖွဲ့အား ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်စ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့တွင် အခြေပြုကာ အနီးကပ် ကွပ်ကဲသွားရန် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၅။ တပ်မတော်အနေဖြင့် မုန်တိုင်းဒဏ်ကျရောက်နိုင်သော ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း ဒေသရှိ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များတွင် လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ သင်္ဘော၊ မော်တော်ယာဉ်များအား လိုအပ်ပါက ချက်ချင်းအကူအညီပေးနိုင်ရေး အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး ဆေးကုသရေးအဖွဲ့များနှင့် အခြား အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် အဖွဲ့များကိုလည်း ဖွဲ့စည်း၍ ကြိုတင်အသင့်ပြင်ဆင် ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
4th Waxing of Kason, 1375 ME
1. According to the announcement at (13.00) hrs today by the Department of Meteorology and Hydrology, cyclone “Mahasen” over Southeast Bay of Bengal is centered at about (410) miles to the west of Cocogyun, about (540) miles southwest of Pathein, about (590) miles southwest of Kyaukpyu of Myanmar and approximately (380) miles southeast of Chennai of India. The cyclonic storm is likely to move northward and the wind speed near the eye of the storm may reach 60 mph.
2. Rakhine Coast and off and along coastal areas of Delta Region are likely to see high tide with strong wind during the storm. Instructions have been aired through radio and television on how to response in the storm.
3. Dwellers living in huts and makeshift tents throughout the places with the likelihood of facing storm and high tide within Rakhine State have been instructed to move to safety by 14/15 May.
4. The administration team comprising Chairman of National Disaster Preparedness Central Committee Vice-President U Nyan Tun and personnel from administrative work committee has been tasked with giving close supervision based in An of Rakhine State as of 14 May.
5. The military have been prepared planes, helicopters, vessels, and vehicles at commands situated in coast areas with livelihood of storm risk, in case of emergency and it has also formed medical teams and other supportive teams.
YOU ARE HERE: Home Current News meottawa Republic of the Union of Myanmar, Information Team, Press Release